Ny Fananganana Birao Anatiny
Asabotsy 9 Jolay 2022
Ny Fananganana Birao Anatiny Misy foana takelaka famantarana be dia be matetika eny amin'ny lalana mitsangana sy miolikolika ary manaraka ny lalana manakana ny tena endrika ara-maritrano. Izany dia manery ny fomba hamerenany ny takelaka famantarana ho fanatsarana sy fampivoarana ireo fiantraikan'ireo lahatsoratra haingon-trano any ivelany. Ny toerana famolavolana anatiny dia ny fanalefahana ny lamin'asa teo aloha. Fahazavana voajanahary no nampidirina. Ny lavaka avo dia aorina amin'ny habakabaka. Niova ny tohatra. Miova hoe aiza no anaovana ny tohatra. Izany dia miteraka fahavoazana vaovao avy amin'ny fetra taloha.
Zoma 8 Jolay 2022
Salon Volo Ny volo volo eo amin'ny volo dia miankina amin'ny géometria amin'ny loko mainty, fotsy, ary ny volo. Ny fihetsika mamontsina volo dia adika amin'ny fitavoan'ireo sampana mpanao sokitra. Ny motif telozoro dia mamolavola ny cubes sy ny fiaramanidina miainga avy amin'ny gorodona mankany amin'ny gorodona amin'ny alàlan'ny hetsika fanangonana, fanapahana, ary fanjairana. Ny fantsom-pahazavana napetaka amin'ireo tsipika mizara dia manome fehikibo marobe maro, manjary jiro fanampiny mandritra ny famaha ny toetry ny valindrihana ambany. Izy ireo dia miitatra sy miaraka amin'ny taratry ny fitaratra lehibe, mikatona malalaka eo anelanelan'ny fiaramanidina sy ny telo-dimensionality.
Zaridaina Manokana Dia Zaridaina Manokana
Alakamisy 7 Jolay 2022
Zaridaina Manokana Dia Zaridaina Manokana Ny fanamby dia natao tamin'ny fanamboarana trano an-trano taloha ary mamadika azy io ho tanin'ny fandriampahalemana sy mangina, miasa tanteraka amin'ny sehatry ny maritrano sy ny faritra. Nohavaozina ny tarehimarika, vita ny asa an-trano natao teo amin'ireo pavings ary ny dobo filomanosana ary ny rindrina milomano ary namboarina ireo rindrina mihazona azy, mamorona vy vita amin'ny vy vita amin'ny rindrina, rindrina ary fefy. Ny fambolena sy ny fitrandrahana ary ny fitahirizan-drano, ary ny jiro, ny fanaka ary ny kojakoja koa dia voarindra tanteraka.
Ny Kafe Sy Ny Trano Fisakafoanana
Ny Kafe Sy Ny Trano Fisakafoanana Ny hevitra namolavola azy dia nalaina avy tany Etazonia steak sy smokehouses, ary vokatry ny ekipa mpikaroka dingana voalohany dia nanapa-kevitra ny hampiasana ny hazo sy ny hoditra miaraka amin'ny loko maizina toy ny mainty sy ny maitso, ny ekipa mpikaroka. Ny volamena dia nalaina tamina hazavana mafana sy maivana. Ny toetra mampiavaka ny famolavolana dia misy chandelier gantungina lehibe 6 izay misy vy vita amin'ny vy anodized 1200 vita amin'ny tanana. Ary koa ny fantsom-baravarankely 9 metatra, izay eo amina gony 275 santimetatra izay misy tavoahangy tsara tarehy sy samy hafa, tsy misy tohana manarona ny fihoaram-baravarana.
Mpandahateny Sperso dia avy amin'ny teny roa Sperma sy Feo. Ny endri-tsoratra miavaka manjelanjelatra sy ny mpandahateny ao anaty lavaka eo an-doha dia ilazana ny fahalalam-pomba sy ny fidirany lalina amin'ny feo manodidina ny tontolo toy ny afon'ny lahy sperm iray ho ao amin'ny vehivavy ovum mandritra ny fiterahana. Ny tanjona dia ny famokarana herinaratra avo lenta ary avo lenta manodidina ny tontolo iainana. Ny tamba-jotra tsy misy tambiny dia ahafahan'ny mpampiasa mampifandray ny finday, solosaina, tablety ary fitaovana hafa amin'ny mpandeha amin'ny alàlan'ny Bluetooth. Io kabary am-bava io dia azo ampiasaina manokana amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, efitrano fatoriana sy efitrano fandraisam-bahiny.
Ny Fikarohana Sy Ny Fampandrosoana Architectural
Ny Fikarohana Sy Ny Fampandrosoana Architectural Ny tetik'asa arsitikan'ny Centre Technology dia manana torolàlana momba ny fampidirana ny ensemble maritrano amin'ny toerana manodidina, toerana mangina sy mahafinaritra. Ity hevitra noforonina ity dia mahatonga ny ensemble ho marika maha-olombelona, natao ho fanilihana ara-tsaina ilaina ny mpikaroka izay hanao azy, izay naseho tao amin'ny plastika sy ny tanjony. Ny endrika mahavariana sy mampiavaka ny tafo amin'ny endrika mivalona sy miolikoloka dia saika hikasika ny andalana miorim-paka izay mamaritra izany, ny toetra mampiavaka ny fahasaronan'ny arsitikanina.
Ny Fananganana Birao Anatiny Salon Volo Zaridaina Manokana Dia Zaridaina Manokana Ny Kafe Sy Ny Trano Fisakafoanana Mpandahateny Ny Fikarohana Sy Ny Fampandrosoana Architectural